Izibane ze-LED ezingenaziqhushumbisi-zibane-zibane ze-LED eTshayina-ubungqina bokuqhushumba be-LED ababoneleli kunye neFactory
I-1.isetyenziswe ngokubanzi kwi-oil extraction, ukucocwa kwe-oyile, imboni yeekhemikhali, imikhosi yezempi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile e-offshore, i-oil tankers kunye nezinye iindawo zokukhanyisa eziqhelekileyo kunye nokukhanyisa ukusebenza.
I-2.Ifanelekile kwiprojekthi yokuvuselela ukugcinwa kwamandla okukhanyisa kunye nokutshintshwa kweendawo ezinzima;
3.Ifanelekile kwindawo yoku-1 yerhasi eqhumayo, indawo yesi-2;
4. Umoya oqhumayo: iklasi ⅡA,ⅡB, ⅡC
6. Ifanelekile kwiimfuno eziphezulu zokukhusela, iindawo ezimanzi;
7. Ifanele indawo yobushushu obuphantsi ngaphezulu kwe-40℃.
I-BAD63-Uthotho lwe-Explosion-proof high performance kunye nokonga isibane se-LED
I-1. isetyenziswe ngokubanzi kwi-oyile, ukucocwa kwe-oyile, imboni yeekhemikhali, imikhosi yemikhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile e-offshore, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa eziqhelekileyo kunye nokukhanyisa okusebenzayo.
2. Ukulungele ukukhanyisa iprojekthi yokuvuselela ukugcinwa kwamandla kunye nokutshintshwa kweendawo ezinzima;
FCD (F, T, P) 96 series Explosion-ubungqina obusebenzayo obuphezulu kunye nokugcina amandla isibane se-LED
1. Isetyenziswa kakhulu ekutsalweni kwe-oyile, ekusulungekisweni kwe-oyile, kushishino lweekhemikhali, emkhosini nakwezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile angaphesheya kolwandle, iitanki ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa okuqhelekileyo kunye nezibane zokusebenza;
2.Ifanele ukulayita iprojekthi yokuvuselela ukonga umbane kunye nokutshintshwa kweendawo ezinzima;
4.Umoya oqhumayo: iklasi II A, II B,II C;
5.Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo 22,21;
I-6.Ifanelekile kwiimfuno eziphezulu zokukhusela, iindawo ezimanzi;
7.Ifanelekile kwindawo ukusuka -50℃ ukuya +50℃.
FCF98(T, L) series Explosion-proof-proof (cast, street) isibane se-LED
I-1.Isetyenziswe ngokubanzi kwi-oyile, ukucocwa kwe-oyile, ishishini lemichiza, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile e-offshore, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa okuqhelekileyo kunye nokukhanyisa okusebenzayo;
4. Umoya oqhushumbayo: iklasi ⅡA,ⅡB,ⅡC;
7. Ilungele indawo ukusuka -50℃ ukuya +50.
I-BAD63-Uthotho lwezibane ze-LED ezibonisa ukuqhuma okuphezulu konga amandla (isibane sesilingi)